राम्रो काम ग¥यो भने ग्राहक आफै खोजेर आउँछन् | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
राम्रो काम ग¥यो भने ग्राहक आफै खोजेर आउँछन्
| 607 Views | Published Date : 20th December 2017 |
किम्स बियुटी पर्लरकी सन्चालिका कामना जिएम सँग भ्एको छोटो मिठो कुराकानी:
> ब्युटिसियन भनेको के हो ?
= मानिसको प्राकृतिक सुन्दरता आध्यात्मिक सुन्दरता र भौतिक सुन्दरताहरु देख्न सकिन्छ । कुन पनि व्यक्ति आपःूमा सम्पूर्ण रुपले भरिपूर्ण भएको कमै पाइन्छ । कुनै पनि मानिसलाई प्रकृतिको सम्पूर्ण सौन्दर्य प्रदान गरिएको हुँदैन । उसमा कुनै न कुनै किसिमको कमी अवश्य नै रहन जान्छ । अथवा प्रकृतिले वा विधाताले भनौ उसलाई ठगेको हुन्छ । जस्तैः कसैको अनुहार नमिलेको, कसैको शारीरिक बनावट नमिलेको र कसैको उमेर नपुगी कपाल फुल्ने, अनुहारमा अनावश्यक रौं आउनु आदि । यसले गदा मानिसमा हुनुपर्ने सुन्दरता प्रतिकुल असर परिरहेको हुन्छ । त्यही भएर आज आएर त्यही कुरुपतालाई केही हदसम्म कम वा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नै ब्युटिसियनको जन्म भएको हो ।
> पार्लरले समाजमा विकृति फैलाउँछ भन्छन्, यसप्रति तपाईको के धारणा छ ?
= यो भन्नु एकदम सरासर गलत हो । काम भन्ने कुरा यो राम्रो त्यो राम्रो भन्ने हुँदैहुँदैन । काम, सीप भन्ने कुरा सधै अगाडि नै हुन्छ । जीवनमा सबै कर्म र जिम्मेवारी चाहे अनुरुप नहुन सक्छ । तर त्यसलाई सही देख्ने र स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता सकारात्मक सोचले विकास गर्छ । हाम्रा मस्तिष्कको आधार हेर्दा कति सानो छ तर यसको सोच्ने विचार अथाह छ । किनभने मानिस जन्मजात चेतनशील विवेकशील प्राणी हो । सोच्ने र विचार गर्न सक्ने शक्ति अरु प्राणीभन्दा बढी छ । मानिसमा आज हामी नारीहरु जहाँ जुन स्थानमा र परिवेशमा छौ त्यो हाम्रो सोचको परिणाम हो । मानिसहरुले नकारात्मक र सकारात्मक सोच गर्छन् । नकारात्मक पनि हामीले लगायको अर्थ हो । त्यही नकारात्मकमा सकारात्मकता देख्ने खुबी पनि हामीसँगै छ । किनभने नकारात्मक सोचको बृद्धि हुँदै जाँदा हरेक कुरामा नकारात्मक देख्ने बानी भइसकेको हुन्छ । त्यसैले सोच र दृष्टिकोणमा फरक छ । सोच हाम्रो विचार हो भने दृष्टिकोण हाम्रो हेराई । समाजमा विकृति मान्छेले फैलाउने हो । जति पनि नराम्रो कामहरु समाजमा नपच्ने जस्ता कामहरु गर्न देशमा गलत कामहरु गरेर देशलाई डुबाउनु यो सब मान्छेको व्यहारले स्वभाले गर्नु हो । पार्लरले आफूलाई मजा होइन अरुलाई पनि रोजगारी दिन सिकाएको छ ।
> पहिलेको तुलनामा अहिले पार्लर जथाभावी खुल्नुको कारण के होला ?
= अब भन्नु पर्दा पहिलेको जमानाभन्दा अहिलेको जमाना धेरै अन्तर भइसकेको छ । हरेक कुराहरु हेर्नुपर्दा पार्लर माझ होइन सबै चिजको माजा बढेको छ । जस्तैः बैंकहरु, सिलाईकटाई अनि थुप्रै काम व्यापारहरु पहिलाभन्दा अहिले बढ्दै गएको छ । किनकि पहिला मािनसहरुले यति सीपहरु सिक्न रुचाउँदैन थिए र ट्रेनिङ सेन्टरहरु पनि थिएन । पहिलाभन्दा अहिले हरेक ठाउँमा विकसित हुँदै गयौ । मान्टेको जनसंख्या पनि बढ्दै गयो । मान्छेहरु बेरोजगार भए । जसले गर्दा बिना सीपको काम पाउन गाह्रो भयो देशमा वा देश बाहिर । त्यसकारण मान्छेहरु बाध्य भए काम, सीप सिक्नुपर्छ भनेर अनि सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । जसले गर्दा आज भोलि जताततै पार्लरहरु खुलेको देख्न सकिन्छ । अर्को कुरा यो पेशा धेरै राम्रो मानिदै आएको छ ।
> व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ ?
= राम्रो नै चलिरहेको छ । मौसम अनुसार चाडपर्वहरुमा विवाह, पार्टीमा राम्रो व्यापार हुन्छ । सिजनमा भ्याईनभ्याई भइन्छ । अब अघि पछि त्यही हो केही हल्का भए पनि व्यापार चलिनै रहन्छ । राम्रो काम ग¥यो भने ग्राहक आफै खोजेर आई नै रहन्छ । यसो हुँदा खुशी लाग्छ । आज यो व्यवसाय रोजेर सन्तुष्ट छु ।
> जिल्लामा पार्लर व्यवसाय कस्तो छ ?
= मलाई लाग्छ धेरै राम्रो छ । पहिलाको भन्दा अहिले हालमा धेरै नै पार्लरहरु खुलेको छ । कम्पिटिसनको जमाना पनि छ । पार्लरको आवश्यकता चाहिन्छ सबैलाई । जसले गर्दा जिल्ला पनि पार्लरको प्रयोग भइरहेको छ । अब भन्नु पर्दा राजधानी जस्तो पार्लरको व्यवसाय यहाँ केही कम नै देखिन्छ ।
> पार्लर व्यवसायमा युवतीहरुको आकर्षण बढ्नुको कारण के हो ?
= मेरो आकांक्षा हरेक नारीको सुन्दरता महिमालाई प्रकृतिको सुन्दर सृष्टि भनिन्छ । सुन्दरता भन्ने बित्तिकै महिला भन्ने बुझिन्छ । महिला तथा सुन्दरता एकै रुपमा अघि आउँछन् । प्रायः सबैलाई सुन्दर रहन, फिट रहन, स्वस्थ रहन मन पराउँछन् । वास्तवमा सृष्टिका हरेक महिला कुनै न कुनै रुपमा सुन्दर हुन्छन् । र बाहिरी सुन्दरतालाई माज कुनै रुपमा सुन्दर भनिदैन आन्तरिक भिजी सुन्दरतालाई पनि उस्तै महत्व दिइन्छ । कुनै पनि मानिसको व्यक्तित्व सुन्दरतासँग जोडिएको हुन्छ । सुन्दर महिलाले गरेका हरेक क्रियाकलाप निकै रोचक लाग्छन् । महिलाको दुबै सौन्दर्य आन्तरिक र बाह्य दुबैको जीवनमा बराबर आवश्यकता छ । सुन्दरताले महिलाहरुमा आत्म विश्वास पनि बढाउँछ । अनि यो व्यवसायमा आफू पनि राम्री हुने अरुलाई पनि राम्रो बनाउने सोच हुन्छ । सीपम सिकेर आत्मनिर्भर भए भने कसैका सामु पैसाको लागि हात थाप्नु पर्दैन भन्ने सोच महिलाहरुले राखेका छन् । हिम्मत नै सबथोक हो । जुन ठाउँमा गएर पनि यो व्यवसाय चलाएर बस्न सकिन्छ ।
> पार्लर र युवतीको बिचको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
= आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग र समयमा पार्लर र महिलाहरुको भूमिका छ । यो दुईको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो भइसकेको छ । अहिलेको जमानामा आएर पनि पार्लर नजानेहरु कमै होलान् । सबैलाई सुन्दर बन्न रहर त छँदैछ । सौन्दर्यप्रति ज्ञान लिन र दिन अगाडि बढिरहेका छन् । दक्ष ट्रेनरद्वारा ट्रेनिङ सिक्न जान्छन् पार्लरमा । यो सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरियोभने कति कुरामा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ । आफूले सिकेका ज्ञान बाँड्छन् । विवाहको लागि दुलाहा, दुलही सिंगार्ने राम्रो बनाउने, देखाउनको लागि पार्लरको आवश्यकता छ । मोडलहरु, हिरोइनहरु फिल्म फेसन शो फोटो शुट गर्नका लागि पार्लर नै धाउनु पर्ने हुन्छ ।
> जिल्लामा पार्लरको विकासको लागि के कस्ता योजनाहरु बनाइरहनु भएको छ ?
= पछिसम्म यही पेशालाई नै अपनाएर राम्रो गर्दै जानुछ । मेरो सपना सौन्दर्य नविन प्रविधिको विस्तार गर्ने सोच गरेको छु । मेरो प्रेरणा नै कामप्रतिको रुची अनि मेरो भरोसा, मेरो सीपलाई लिएर अगाडि बढेर योभन्दा पनि अझ बढी राम्रो गरेर ग्राहकहरुलाई खुशी बनाउन चाहन्छु । हरेक कुराको सुविधा होस् यही हाम्रो जिल्लामा बाहिर जानु पर्ने आवश्यकता नहोस् ।
> तपाईले पार्लर व्यवसाय नै किन रोज्नु भयो ?
= यो व्यवसाय राम्रो लागेर नै रोजेको हुँ । आफू पनि राम्री हुने र अरुलाई पनि राम्रो बनाइदिने पेशामा लाग्न पाउँदा खुशी छु । आफूमा भएको सीप कसैले खोसेर लादैन यो त बढ्दै जाने हो । यो व्यवसाय अपनाए भने म आफू पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छु भन्ने एउटा सोच थियो । मलाई यस्तो लाग्थ्यो आफूमा रहेको शक्ति र सामथ्र्यको पहिचान गर्न सक्छु । म एक्लै त केही गर्न सक्दिन होला भनेर सोचेर बसिरहने हो भने जीवनमा केही उपलब्धी हासिल गर्न सकिदैन । जीवनमा केही गर्ने कोसिश गरियो भने सफलता अवश्यक मिल्छ । अन्यथा केही भएन भनेर गुनासो गर्नु बाहेक अरु के नै विकल्प बाँकी रहन्छ । अन्तमा गणतन्त्र परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद ।